Afrobasket Men U-18: Egypte 61-43 Côte d’Ivoire - Informations et Actualités sur Madagascar
Sports Afrobasket Men U-18: Egypte 61-43 Côte d’Ivoire
Afrobasket Men U-18: Egypte 61-43 Côte d’Ivoire
by Alpha world on 13 h 36 in Sports
Nopotehin’i Egypta tamin’ny isa 61 noho 43 ry zareo Côte d’Ivoire, omaly, teo amin’ny lalao fahatelo natrehiny. Raha niady tanteraka ny fihaonan’ny roa tonta nandritra ny tapa-potoana voalohany, nitsimbadika izany teo amin’ny fidirana faharoa.
Teo amin’ny ampahefa-potoana voalohany, nitarika tamin’ny moka fohy, 15 noho 14, i Egypta. Nitsimbadika anefa izany teo amin’ny ampahefa-potoana faharoa ka mbola moka fohy ihany, saingy nitarika tamin’ny isa 24 noho 23 indray i Côte d’Ivoire. Nanomboka nitarika hatrany kosa ry zareo Faraôna teo amin’ny ampahefa-potoana fahatelo sy fahefatra nivoahany nandresy.
By Alpha world at 13 h 36